October 2015 ~ Myanmar Online News
မွန်ပြည်နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်သည့် အဖွဲ့ခုနစ်ဖွဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာမည်
11:05 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ မွန်ပြည်နယ် အတွင်း မဲစာရင်းများ တိကျမှန် ကန်မှုရှိစေရန် ရွေးကောက်ပွဲလေ့ လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ခုနစ်ဖွဲ့ ရှိကြောင်း မွန်ပြည်နယ် ရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါခုနစ်ဖွဲ့အနက် ဖန် တီးအိမ်၊ People Alliance For Credible Elections (PACE)၊ အမျိုးသားလူငယ် ကွန်ဂရက်၊ စကားဖြူနှင့် Rain Maker အဖွဲ့တို့ သည် ပြည်နယ်ကော်မရှင်ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး ကို စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။
ကျန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ အနက် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့သည် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်ရုံးတို့သည် လမိုင်းမြို့နယ်တို့တွင် စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဟိဏ်းလင်းထက်က ဆိုသည်။
‘‘ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် ဖို့အဖွဲ့တွေက ကော်မရှင်ရုံးမှာ ခွင့်ပြုစာတင်တာ ၂၄ ရက်က ပိတ်သွားပြီ။ ထပ်တိုးလာဖို့ မရှိတော့ ဘူး’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ သတင်းများကို သတင်းမီဒီယာအနည်းစုသာ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ဖော်ပြဟု MID အစီရင်ခံစာဖော်ပြ
ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ် ကာလအတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီများ ၏ သတင်းများကို တင်ဆက်ဖော် ပြရာတွင် သတင်းမီဒီယာအနည်းစုသာ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ မျှတစွာရေးသားဖော်ပြထားမှု တွေ့ရှိရ ကြောင်း မီဒီယာလေ့လာစောင့် ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Myanmar Ins-titute Democracy (MID) က ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ပြန်သည့် အ စီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
MID က မီဒီယာလေ့လာ စောင့်ကြည့်မှု ပထမအကြိမ်အစီ ရင်ခံစာကို ပြီးခဲ့သည့် အောက်တို ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် အစီရင်ခံစာကို အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်၌ ထပ်မံထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ မူ ၀ါဒဆိုင်ရာ အခြေခံများကို သ တင်းအဖြစ် ဖော်ပြမှု၌ အစိုးရ ပိုင် သတင်းမီဒီယာက အနည်းအ ကျဉ်းသာဖော်ပြပြီး လက်ရှိအစိုးရ ၏ အောင်မြင်ပြီးမြောက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကမ်ပိန်းမဟုတ် သည့် ခရီးစဉ်များကိုသာ တင် ဆက်ဖော်ပြထားကြောင်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထား သည်။
၂၀၁၆ တွင် တပ်မတော်ထိပ်သီးပိုင်းကို အကြီးအကျယ် ရှင်းထုတ်မည်ဟုယူဆရပြီး ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ တကြိမ်ပဲ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိဟု လယ်ရီဂျေဂင် ဟောကိန်းထုတ်
“အရပ်ဘက်အစိုးရ လုံးဝ တက်လာဖို့ဆိုတာ ၂၀၂၀ မှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၂၀၁၅ မှာ အရပ်ဘက် အစိုးရပြောင်းလဲဖို့က ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မဖြစ်နိုင်ဘဲ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းရှိပါတယ်”
11:21 PM အထွေထွေ No comments
တခါတုန်းက နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုမှာ ငယ်ရွယ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ ဘုရင်တပါး နန်းတက်ခဲ့တယ်……ထိုတိုင်းပြည်ရဲ့ အနီးအနားမှာ အလွန်းအင်အားကြီးပြီး စစ်လိုလားတဲ့ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်…..ထိုဘုရင်ကြီးဟာ တိုင်းပြည်ငယ်လေး ကိုသိမ်းပိုက်ချင်ပေမဲ့ ဘုရင်ငယ်လေးရဲ့ ငယ်ရွယ်မှုနဲ့ ထက်မြက်တဲ့အတွေးအ ခေါ်တွေကို သဘောကျလို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်…..အဲ့ဒီအခွင့် အရေးကတော့ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ….ဘုရင်ငယ်လေးအတွက် အချိန်တစ်နှစ်ပေးထားပြီး မဖြေနိုင်ပါက အသတ်ခံရမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်….
ဒီတစ်ပတ်ကြည့်ရမယ့် ရုပ်ရှင် - The Diabolical
7:20 PM နိုင်ငံတကာသတင်း, အနုပညာ No comments
- ဒီတစ်ပတ် အားလပ်ရက်လေးမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အတွက် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားကိုပဲ ညွှန်းရပြန်ပါပြီ။ အခုတစ်လော ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလည်း ထိတ်လန့်စရာ ဇာတ်ကားတွေချည်းပဲ ဆက်တိုက်တင်နေတာမို့ ဒီလို ဇာတ်လမ်းတွေ ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သဘောတွေ့နေကြမှာပါ။
သမိုင်းလမ်းဆုံယာဉ်တိုက်မှု တစ်ဦးသေ၊ ရှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကားလမ်းပေါ်တွင် ရှင်းလင်းနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − နစ်ကီ)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် သမိုင်းလမ်းဆုံတွင် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် ည ၇ နာရီခန့်၌ ၁၂၄ ယာဉ်လိုင်းမှခရီးသည်တင်ကားတစ်စီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ရှေ့မှကားများနှင့် လမ်းသွားလမ်းလာများကို တိုက်မိခဲ့ရာ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးပြီး ရှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသားနှစ်ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၂) ရပ်ကွက် ရာအိမ်မှူး ဦးမျိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းသည် နိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေကို အသုံးပြုထားကြောင်း ၀န်ကြီးဌာနက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တုံ့ပြန်
6:43 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
လက်ပံတန်းမြို့နယ် သာယာရွှေပြည်ကျေးရွာတွင် မြစိမ်းရောင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲစည်းနေစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ − မွေးရေ/ကျေးလက်)
မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာ စီ မံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေကျပ် ၁၆၀ ဘီလီယံကျော်အသုံးပြု၍ ကျေးရွာငါးထောင်ကျော်တွင် ပြည်သူကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေး လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန်သည်။
ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ စည်းကမ်းဖောက်ပါက မထသအပြင် ယာဉ်ထိန်းရဲသို့လည်း တိုင်ကြားနိုင်
6:41 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပါက ဌာနနှစ်ခုသို့ တိုင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံ − နစ်ကီ)
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ပြေးဆွဲ လျက်ရှိသည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ် များ စည်းကမ်းဖောက်ပါက မထသ(ဗဟို)အပြင် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်း ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ပါ တိုင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒီချုပ်အမတ်လောင်းများ သာကေတတွင် မဲဆွယ်စဉ် ဓားခုတ်ခံရ
6:40 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့သော ဦးနိုင်ငံလင်းကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ တွေရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − လင်းဘိုဘို/အီးပီအေ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ သာကေတမြို့နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ သာကေတမြို့နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းစဉ် ယမန်နေ့ (အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်) ည ၉ နာရီခန့်က သာကေတ မြို့နယ် မာန်ပြေရပ်ကွက် ၈ လမ်း
ထိပ်၌ ဓားဖြင့် အခုတ်ခံရပြီး လက်ရှိလွှတ်တော်အမတ် ဦးနိုင်ငံလင်းအပါအ၀င် ပါတီဝင် နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဟု သမ္မတမေးခွန်းထုတ်ပြီး ထပ်မံပြောင်းလဲရန် ကွန်မြူနစ်စနစ်သာရှိဟုဆို
6:37 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမှာစကားပြောကြားနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − သက်ဆွေ)
ငပုတော - တပ်မတော်အစိုးရ သည် ပြည်သူများလိုလားသော ဒီမိုကရေစီအစိုးရစနစ်သို့ ပြောင်း လဲခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ‘‘ပြောင်းလဲချိန်တန် ပြီဆိုခြင်းမှာ ဘာကိုပြောတာပါ လဲ’’ဟု ငပုတောမြို့နယ် ဥသျှစ်ကွင်းကျေးရွာ၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
လူမှုကွန်ယက်ပေါ် ဥာဏ်လင်းအောင် တင်လိုက်တဲ့2Months Anniversary ပို့စ် နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းသွားတဲ့ ချမ်းချမ်းပိုင်
11:50 PM အနုပညာ No comments
Golden Star Model Agency က မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်ချမ်းချမ်းပိုင်ဟာ Ms.Monsoon 2015 Winner ဆုအပြင် Ms . မန္တလာမြင့်ကလုပ်တဲ့ ( Mr.&Miss Fashion 2015) မှာလဲ 2nd Runner up ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ချမ်းချမ်းပိုင်က များမကြာမှီရက်ပိုင်းအတွင်းက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ သူနဲ့ အဆိုတော် ဥာဏ်လင်းအောင် ချစ်ကြိုက်နေတဲ့ အချစ်ရေး ဂယက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူအများရဲ့ပြောဆိုတိုက်ခိုက်ခြင်း ၊ ပရိသတ်ရဲ့ အမြင်မကြည်လင်ခြင်းမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူမရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့၊ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်း သူမကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တာက
အနုပညာရှင်များ၏ သတင်းများ (ရှင် စာပေနှင့် အနုပညာဂျာနယ်)
8:52 PM အနုပညာ No comments
7:07 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
အောင်ပွဲရ အမေရိကန်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းအား အိမ်ဖြူတော်သို့ ဖိတ်ကြားဂုဏ်ပြု
6:52 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
အိမ်ဖြူတော်တွင်ပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၅ အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ချန်ပီယံ အမေရိကန်အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းအား ဂုဏ်ပြုပွဲ၌ သမ္မတအိုဘားမားအား အသင်းနည်းပြ ဂျေးအဲလစ်က အသင်းအင်္ကျီတစ်ထည် ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးအပ်စဉ် (reuters)
၂၀၁၅ ကမ္ဘာ့ဖလား ဆွတ်ခူးခဲ့သော အမေရိကန်အမျိုး သမီး လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအ သင်းအား အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက အောက် တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် အိမ်ဖြူတော် သို့ ဖိတ်ကြား၍ ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
New Face Model - Yoon Thiri Khin
8:25 PM အနုပညာ No comments
ကိုကိုးကျွ န်းမှ ပြည်သူများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖုန်းဖြင့် စကားပြောမည်
7:56 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ကိုကိုးကျွန်းပေါ်တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရန်သွားနေသော ဒီချုပ်အမတ်လောင်းနှင့်ပါတီဝင်များကို အောက်တိုဘာနောက်ဆုံးပတ်က တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-စိုင်းဇော်)
ကိုကိုးကျွန်းတွင်နေထိုင် ကြသည့် ပြည်သူများအကြောက်တရားကင်းစင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လုပ်ဆောင်မည့် ပါတီကိုမဲပေးရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တယ်လီဖုန်းဖြင့် အားပေးစကားပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ်(NLD)မှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောသည်။
ချစ်သူမိန်းခလေးကို သံကြိုးများဖြင့် ချုပ်နှောင်ကာ ရိုက်နှက်နှိပ်စက် ပေါင်းသင်းခဲ့သူကို ဖမ်းမိ
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (ဌ) ရပ်ကွက်၊ စိန်ချယ်လမ်းတွင် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် ညပိုင်းက အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးကို နေအိမ်အခန်းအတွင်း ရက်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာ သံကြိုးများဖြင့် ချုပ်နှောင်၍ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ပြီး အဓမ္မပြုကျင့် ပေါင်းသင်းခဲ့သည့် အသက် ၃၂ နှစ် အရွယ်ရှိ အမျိုးသားကို ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကံကောင်းပါ့မလား - ခိုင်သင်းကြည်
12:55 AM အနုပညာ No comments
ကောင်းကျိုးကိုယ်၌တည်စေမင်း ဇာတ်ကားထဲက ဗေဒါဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်က နောက်တစ်ကြိမ်လုပ် ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ဒီဇာတ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အားရကျေ နပ်မှုကတော့ မခိုင်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ တာဝန်ကျေ အောင် စိတ်အပြည့်ထည့်ပြီး ကြိုး စားထားပါတယ်။ ပြောရတဲ့ ဒိုင်ယာ လော့ခ်ကလည်း ကောင်းပြီး၊ လုပ်ရတဲ့ကာရိုက်တာလေးကလည်း အရမ်းကောင်းတော့ အားရပါတယ်။ ဗေဒါ ဖြစ်ဖို့အတွက် ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ မိတ်ကပ်ဆရာတောင် ခေါ်မသွားဘူး။
အွန်လိုင်းပေါ် အပြန်အလှန် ဆဲဆိုရာမှ ရှစ်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦး ဓားထိုးခံရ
ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ အမှတ် ၃၆ ရပ်ကွက်၊ ရဲရန်နိုင်လမ်းနှင့် အောင်သပြေ လမ်းထောင့်တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး နေအိမ်ပြန်လာသည့် ကျောင်းသားများ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ဆဲဆိုသည့် ကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ အသက် ၁၃ နှစ် အရွယ်ရှိ ရှစ်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦး ဓားထိုးခံရကြောင်း ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
ကျဉ်စက်ဖြင့် တရားခံ ဖမ်းသည့် ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ဓားထိုးခံရ
7:53 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
သာကေတမြို့နယ်၊ စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်၊ ရန်နိုင်ဆွေလမ်းတွင် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက် နံနက် ၇ နာရီက ခိုးမှုကျူးလွန်သူဟုယူဆရသူ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားကို ကျဉ်စက်ဖြင့်ထိုးကာ ဖမ်းဆီးသည့် ရဲတပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးနှင့် တရားခံကို ဝိုင်းဝန်းကူညီဖမ်းဆီးပေးသည့် အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦး ဓားထိုးခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
‘ပညာတတ်တွေကို တန်ဖိုးထားလားဆိုတော့ ဆရာဝန်လခငါးသောင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှမရှင်သန်နိုင်ဘူး’’- ချစ်သုဝေနှင့် စကားစမြည်
7:18 PM အင်တာဗျူး, အနုပညာ No comments
ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုထက် နိုင်ငံရေးကို ပိုမိုအားသွန်ခွန်စိုက် ပြုလုပ်ဖြစ်လာတာတွေ့ရတဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ် ဆောင် ချစ်သုဝေရဲ့ လတ်တလောဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ ၎င်းရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်ထားရှိတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တချို့ကို မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဗီဒီယို အကြိုခံစားခြင်း- ရင်ဘတ်ချင်း နီးနီးလေး
6:54 PM အနုပညာ No comments
- ဒီနေ့ရဲ့ ဗီဒီယိုအညွှန်းကဏ္ဍမှာ တော့ လူငယ် အချစ်ဇာတ်ကား လေးတစ်ကားကို ညွှန်းပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
သုန္ဒရီက သူ့အဒေါ်မိသားစု နဲ့အတူနေပါတယ်။ သူ့အဒေါ်မိ သားစုက တစ်ယောက်မှအလုပ်မ လုပ်ဘဲ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံးကို သုန္ဒရီက ရှာကျွေးနေရပါတယ်။ သူ့အဒေါ်ကိုယ်တိုင်က သူ့ကိုငယ် ငယ်ကတည်းက ကျွေးမွေးထားရ တာဆိုပြီး အမြဲတမ်း အပြစ်တင် လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ မောင်နှမ ၀မ်းကွဲတွေကလည်း သုန္ဒရီကိုအိမ်ဖော်တစ်ယောက်လို့ ပဲ ဆက်ဆံအော်ငေါက်နေတာပါ။
မွန်ပြည်နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်သည့် အဖွဲ့...
နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ သတင်းများကို သတင်းမီဒီယာအနည်းစ...
၂၀၁၆ တွင် တပ်မတော်ထိပ်သီးပိုင်းကို အကြီးအကျယ် ရှင်...
ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ စည်းကမ်းဖောက်ပါက မထသအပြင် ယာဉ်ထ...
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဟု သမ္မတမေးခ...
လူမှုကွန်ယက်ပေါ် ဥာဏ်လင်းအောင် တင်လိုက်တဲ့2Months ...
အနုပညာရှင်များ၏ သတင်းများ (ရှင် စာပေနှင့် အနုပညာဂျ...
ကုလလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာအစီရင်ခံစာ...
အောင်ပွဲရ အမေရိကန်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းအား အိမ်ဖြ...
ကိုကိုးကျွ န်းမှ ပြည်သူများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
ချစ်သူမိန်းခလေးကို သံကြိုးများဖြင့် ချုပ်နှောင်ကာ ...
အွန်လိုင်းပေါ် အပြန်အလှန် ဆဲဆိုရာမှ ရှစ်တန်းကျောင်း...
‘ပညာတတ်တွေကို တန်ဖိုးထားလားဆိုတော့ ဆရာဝန်လခငါးသောင...
NCA လက်မှတ် မထိုးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ...
တောင်ကြီးမြို့လယ်ပေါက်ကွဲမှု လက်ပစ်ဗုံးဟု ရဲတပ်ဖွဲ့...
လှပချောမွေ့တဲ့ အသားအရေမျိုး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်
ပျော်ရွှင်သော ချစ်သူစုံတွဲတိုင်း နေ့စဉ်ပြုမူကျင့်သု...
နောင်ချိုမြို့အ၀င် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ...
အသက် (၄၀) ကျော်လာပြီဆိုတာနဲ့ မှီဝဲသင့်တဲ့ဆေးဝါးခုန...
မြန်မာ ၂ ဦးထံမှ ရွှေထည် ၁၂၀ ကျပ်သားခန့်နှင့် ဘတ်ငေ...
Sexy Photo တွေကြိုက်တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ခဲခဲခူ
NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ကိုကိုးကျွန်းသို့ မဲဆွယ...
အပြောခံရမယ့်အတူတူ ဂရုမစိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ - သင်ဇ...
တပ်မတော်မှတိုက်ပွဲတံဆိပ် (ရွှေလင်းယုန်)နှင့် တိုက်ပ...
မန္တလေး ရတနာပုံတက္ကသိုလ် အနီး လူသေလောင်းတွေ့
၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်း ကြ...
ဒါက်တာ သိန်းမြင့်ထံသို့ အကြောင်းပြန်ကြားချက် - ဇော...
(၆)နှစ်သမီးအား သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် အဓမ္မပြုကျင့်
ပြိုင်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို စကားစစ်ထိုးပွဲ ...
ဒီချုပ်နိုင်လျှင် သမ္မတလောင်း ဘယ်သူဖြစ်မလဲ
ကမ္ဘာ့အဆင့် ကာရာအိုကေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာအမ...
မဲပညာပေးအကြောင်းပြ၍ နယ်တကာလှည့် ဟောပြောစည်းရုံးခြင...
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လေးစားလိုက်နာမှု မရှိလျှင် အမေရ...
ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သော စိမ်းလဲ့ကန်သ...
ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် ငြိမ်...
စီးပွားရေးဖွံဖြိုးမှုမရှိ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည...
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး သုံးပတ်အကြာတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရလ...
စစ်မှန်တဲ့ လက်တွဲဖော်ကောင်း တစ်ဦးက သူ့ချစ်သူအပေါ် ...
အညာဒေသရှိ မြို့ကြီးများတွင် NLD အားသာပြီး ကျေးလက်တ...
တပ်နယ်မြေ အတွင်း ရှိ မဲရုံများ ကို အီးယူ စောင့်ကြည...
အပြော နှင့် အလုပ် (The Myanmar Review Journal )
မန္တလေးတိုင်း မဲဆန္ဒနယ်အချို့အတွက် လုံခြုံရေးလိုပါက ...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ မဲဝယ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လူသားတစ်ယောက...
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ၊သတင်းများ (Health Dig...
ထားဝယ်တွင် သုံးနှစ်ကြာ ကျောက်မီးသွေး တူးနေသည့် ထို...
ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် ပြည်ပရောက် မြန်မာ...
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများနှင့် အက်စ်အက်စ်အေ (ဝမ်ဟိုင်...
TOP 10 Sexiest Outfits Of Suzy Bae
ပါတီများအပြုတ်တိုက်မည့်စနစ် ကျင့်သုံးခဲ့၍ တိုင်းပြ...
အကြွင်းမဲ့အာဏာရရှိရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီအနိုင်ကျင့်မှု
အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက် လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပါတ...
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမည်ဟုြ...
ရော်နယ်ဒိုနှင့်နေမာ တစ်ပတ်အတွင်း ဂိုးသွင်းစံချိန်သ...
အမတ်လောင်းများ ကျပ်ငါးရာနှင့်အထက် ရွေးကောက်ပွဲကုန်...
အနုပညာမှာ ဘယ်လောက်အောင်မြင်နေနေ ပညာရေးဘက်မှာ ချို့...
အင်ဒိုဒုက္ခသည်စခန်းက ရိုဟင်ဂျာ ၂၀၀ နီးပါး ပျောက်ဆုံး
လှိုင်သာယာတွင် သီလရှင်ကို ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီမောင်းသူက အဓ...
ဟားခါးမြို့ရှိ အိမ်ခြေရှစ်ရာကျော် ပြောင်းရွှေ့နေရာခ...
အချစ်ကြောင့် ပူဆွေးနေတဲ့ ခေးဆက်သွင်
NCA အလွန် KIO/KIA နဲ့ အပေါင်းအပါ လက်နက်ကိုင်တို့ရဲ...
တစ်ဖက်လူ ကိုယ့်ကို လိမ်နေသလားဆိုတာ ဒီအချက်တွေကတစ်ဆ...
ဒေါ်ညိုညိုသင်း၏ အောင်နိုင်ရေး ဗီနိုင်းပိုစတာ ၂၀ ဝန်...
စနှိုးဝှိုက် ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ကားကြီးရိုက်ဖို့ရှိတဲ့ ၀...
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် Oral Sex
''အာဏာမရဖူးသူတွေဟာ အာဏာရူးတတ်ပါတယ် '' ဟုပြောဆိုကာ ...
အာဖဂန်မှ တပ်ဆုတ်ရေး ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ဆောင်မည်ဟု...
KTV တွင် အချင်းများသူများကို တားဆီးသည့် စခန်းမှူးန...
ဦးခွန်ဂျာလီနှင့် မချောစန္ဒီထွန်းတို့ကို အမြန်ဆုံြး...
ဗီလာရီးရဲလ် ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တို့ ဇယားကို ဆက်ဦးဆော...
လွှတ်တော် လစာတစ်ဝက် မဲဆန္ဒရှင်များကို ပြန်လည် လှူဒါန...
ဇေယျာရွှေမြေကို အနိုင်ရပါက ရန်ကုန်အသင်း လေးကြိမ်မြေ...
အမေရိကန် လုံခြုံရေးအချက်အလက်များကို ဖောက်ထွင်းခိုး...